Afrika Xuduudaha Dalxiiska Cusub: Waxay kahadashaa Xarunta Satelite-ka Nigeria ee GTRCMC
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Afrika Xuduudaha Dalxiiska Cusub: Waxay kahadashaa Xarunta Satelite-ka Nigeria ee GTRCMC
Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Jamaica News Breaking • News • Wararka Nigeria • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane Edmund Bartlett (midig) ayaa wada -hadal la yeelanaya Wakiilka Sare ee Nigeria u fadhiya Jamaica, Marwo Maureen Tamuno oo wada -hadallo la leh, markay booqasho sharafeed ugu tagtay Wasiirka, 27 -kii Luulyo, 2021. Intii lagu guda jiray kal -fadhiga waxaa la ogaaday in dooddu hadda waxay u socotaa sameynta xarun dayax -gacmeed oo ah Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka ee Nigeria.
Wasiirka Dalxiiska ee Jamaica ahna Isuduwaha Xarunta Adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka (GTRCMC), Edmund Bartlett, ayaa ku dhawaaqay in hadda ay socdaan wada-xaajoodyo ku aaddan samaynta xarunta dayax-gacmeedka ee GTRCMC ee Nigeria.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica wuxuu jeclaan lahaa inuu booqdo Abuja mustaqbalka dhow si uu u habeeyo qabanqaabada.
Tani waxay calaamad u noqon doontaa aasaaska Xarunta Dayax -gacmeedka Afrika ee labaad ee u -adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka,
Wasiir Bartlett wuxuu muujiyay inuu jeclaan lahaa in Nigeria ay noqoto xaruntii ugu horreysay ee laga hirgeliyo Galbeedka Afrika.
Isagoo ka hadlayey kulan goor hore oo shalay ah uu la yeeshay Wakiilka cusub ee Nigeria u fadhiya Jamaica, Maureen Tamuno, xafiisyada Wasiirka ee New Kingston, Bartlett wuxuu la wadaagay: “Waxaan jeclaan lahayn inaan booqanno Abuja mustaqbalka dhow si aan rasmi uga dhigno qabanqaabada lagu aasaasayo Dayax -gacmeedka labaad ee Afrika. Xarunta u -adkeysiga Dalxiiska Caalamiga ah iyo Xarunta Maareynta Dhibaatooyinka (GTRCMC). ”
Bartlett wuxuu intaas ku daray: “Waqtigan ku -meel -gaarka ah waxaan ku siin doonnaa dhammaan macluumaadka loo baahan yahay si loo suurtogeliyo aasaaska Xarunta. Hadda waxaan leenahay saldhigga lagu dhisi karo kaabayaasha dhaqaalaha, sidoo kale waxaan leenahay rabitaanka iyo ka -qaybgalka raasamaalka Aadanaha. Waxaan jeclaan lahaa in Nigeria ay noqoto xaruntii ugu horreysay ee laga aasaasay Galbeedka Afrika. ”
Xaruntii ugu horreysay ee dayax -gacmeedka GTRCMC waxaa laga aasaasay Kenya, Jaamacadda Kenyatta. Waa xarun dayax -gacmeed goboleed, oo mas'uul ka ah Bariga Afrika, waxayna iskaashi la leedahay GTRCMC -da caalamiga ah, oo ku taal Jaamacadda West Indies (UWI), Jamaica.
“Xarunta Nayjeeriya waxay si fiican u dhammaystiri doontaa xarunta hore looga aasaasay Kenya, maxaa yeelay waa laba ka mid ah waddamada Afrika ugu muhiimsan ee dunidu fahanto. Nigeria waa lambarka koowaad - oo lagu yaqaan inay leedahay dhaqaalaha ugu xoogga badan, dadka ugu badan, waxaadna ku samaysay wax xiiso leh Nollywood, kaasoo raad -dhaqameed weyn ku reebay adduunka, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.